UXiaomi uvavanya isiphumo "sokutshintsha isibhakabhaka" kwi-MIUI app yegalari | I-Androidsis
UXiaomi uvavanya isiphumo "sokutshintsha isibhakabhaka" kwi-MIUI app yegalari
IXiaomi ihlala ijolise ekuqwalaselweni kolu shishino, nokuba kungenxa yokuvuza kwezixhobo zakhe ezilandelayo, uhlaziyo lwe-MIUI okanye ukuvuza kwezicwangciso zakhe.
Iindaba malunga nenkampani ziyaqhubeka nokuvela, kunye nokujikeleza okutsha Umsebenzi omtsha oya kuba kwisoftware yekhamera yeemodeli zeXiaomi ezilandelayo. Oku kuya kufika kwi-MIUI 11.
Abaphuhlisi be-XDA bathi bafumanise, ngophando lwekhowudi, ukuba uXiaomi uphuhlisa enye into eguqula iifoto kwiifowuni zabo izakuvumela abasebenzisi ukuba bonakalise "izulu" ngeendlela ezahlukeneyo ezisetiweyo. Esi siphumo "sotshintsho lwezulu" esitsha siya kubandakanywa njengenxalenye yokusebenza kokuhlelwa kweefoto ngaphakathi kwenkqubo yegalari ye-MIUI.
Ngale nto ilandelayo, abasebenzisi banokuthatha iifoto kunye necandelo lezulu elidlulayo kwaye bayitshintshe ngeseti yezinto ezahlukeneyo ezisetiweyo eziguqula isibhakabhaka kwiindawo ezahlukeneyo.
Ukuseta kwangaphambili ngekhe kutshintshe imbonakalo yesibhakabhakakodwa baya kongeza iziphumo zokukhanyisa ezibalulekileyo kuwo wonke umfanekiso kunye nezinto zokutshatisa ixesha losuku okanye lemozulu emele isibhakabhaka.
Kuya kubakho kwakhona isilayida ukulawula esi siphumo sokukhanyisa. Kukho nevidiyo yokusebenza kwayo, eposwe lilungu le-XDA, iqeqkrz.
Ikhowudi ityhile ukuba isiphumo sokungena esibhakabhakeni siza kubandakanywa kuqala kwiimodeli ezizayo 'raphael', 'davinci' kunye 'pyxis'. Asinakuthetha ngokuqinisekileyo ukuba zeziphi iimodeli ezinala magama ekhowudi, kodwa ngokuqinisekileyo ziya kuba ziqela ezingekabikho kwimarike.
Ukusuka kwindawo ezivuzayo zangaphambili, "u-raphael" kunye no "davinci" ziimodeli ezilandelayo zeXiaomi ezinobuchwephesha beSpapdragon 855 ngokuseta kwekhamera pop kunye nesikena sokubonisa iminwe esibonakalayo. Siyathemba ukuba enye yazo yiMi Mix 4.
Imodeli ebhalwe 'pyxis' kuthiwa yinguqulelo ye-MIUI yesixhobo esitsha seXiaomi Android One (Mi A3), ekrokrelwa ukuba yindlalifa yeMi 6X. Esi sixhobo siza kuba nayo, nangayiphi na imeko, ikhamera yangaphambili ye-megapixel engama-32 kunye nokuhlelwa kweqela le-pixel.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » UXiaomi uvavanya isiphumo "sokutshintsha isibhakabhaka" kwi-MIUI app yegalari
Ii-headphone ze-OnePlus Bullets Wireless 2 zifika kwiiyure ezili-10 kunye nemizuzu eli-10 yeentlawulo
I-Intanethi ye-Samsung, iya kongeza umphathi omtsha wesaziso